သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်း 74 ခု | အပန်းဖြေပေးပါ။
ဣဇာက်သည် | 20/12/2021 15:57 | ယေဘုယျ
သေချာတာကတော့ သင်ဟာ သင့်မိသားစု၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဒါမှမဟုတ် သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ မိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပါတီပွဲတွေကျင်းပဖို့ထက် အစည်းအဝေးတွေအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ မက်လုံးတွေက ဘာတွေလဲ။ အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများ။ ၎င်းတို့တွင် အရသာနှင့် အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်၊ မတူညီသော အမျိုးအစားများနှင့် အပြင်အဆင်အမျိုးမျိုးအတွက် ၎င်းတို့ရှိသည်။ ပျင်းစရာလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး! ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသော ဤခေါင်းစဉ်များဖြင့် သင်သည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်ကို ရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို သင်ရွေးချယ်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေထားသော ဘုတ်ဂိမ်းများကို စုစည်းထားပါသည်-
1.1.1 ကတ်များဖြင့် Solitaire
1.1.5 Arkham Noir- Witch Cult Murders
1.2.4 Arkham ထိတ်လန့
1.2.8 ဖုတ်ကောင်သတ်ခြင်းနှင့် Zombie Kidz Evolution
1.2.9 Mysterium ပန်းခြံ
1.2.10 Andor ၏ဒဏ္ဍာရီများ
1.3 လူကြီးများအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများ
1.4 လူနှစ်ယောက် သို့မဟုတ် စုံတွဲများအတွက်
1.4.1 Dual Tetris ဒီဇိုင်း
1.4.3 ဒိုင်း! duel
1.4.4 Duo လျှို့ဝှက်ကုဒ်
1.4.67အံ့သြဖွယ် Duel
1.6 မိသားစုအတွက် ဘုတ်ဂိမ်းများ
1.7.2 Tricky Moth ဂိမ်း
1.7.3 Dobble ရေစိုခံ
1.8.4 Strick ဂိမ်း
1.9.1 Mattel ပြောပြမယ်။
1.10.3 Checkers ဂိမ်း
1.10.4 Parcheesi နှင့် Goose ဂိမ်း
1.10.5 XXL ဘင်ဂို
1.11.1 Dragon Ball ကုန်းပတ်
1.11.3 Game of thrones ဘုတ်ဂိမ်း
1.11.5 Walking Dead ဉာဏ်စမ်း
1.11.10 Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလား
1.11.12 အံ့ spl ဘွယ်
1.11.13 Cluedo The Big Bang သီအိုရီ
1.11.16 အသေးအဖွဲ Lord of the Rings
1.12.1 ERA အလယ်ခေတ်
1.12.3 ဆည်းဆာ Imperium
1.12.4 Stratego မူရင်း
1.12.8 Great War Centennial Edition
1.12.9 စာအုပ် '44
1.12.10 Imhotep - အီဂျစ်ပြည်ကို တည်ဆောက်သူ
1.13.2 မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများအတွက် အက်ပ်များ
2.1 ဘုတ်ဂိမ်း Escape Room
3 အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
၎င်းတို့သည် သမိုင်းတွင် အကောင်းဆုံး ဘုတ်ဂိမ်းများပါရှိသော အမျိုးအစားများကို ပိုင်းခြားထားပါသည်။ အမျိုးအစားများနှင့် အပြင်အဆင်အလိုက်. သူတို့နှင့်အတူ ပျော်ရွှင်စရာ အခိုက်အတန့်များ များပြားနေခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
ဤ တစ်ယောက်တည်း ပျင်းတယ်။သင့်တွင် ဂိမ်းနှစ်ပွဲ အမြဲမရှိနိုင်ပါ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် အမြဲတမ်းကစားရန် ဆန္ဒမရှိသောကြောင့် ဤတစ်ခုတည်းသော ကစားသမားဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုကို ရယူရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်-
Fournier - ကုန်းပတ်...
ဖဲချပ်များ၊ ဖဲချပ်များ၊ ...
ကုန်းပတ်သည် အုပ်စုလိုက်ကစားနိုင်ရုံသာမက ဖန်တီးနိုင်သည်။ ကိုယ့်အထီးကျန် အသန့်ရှင်းဆုံး Windows စတိုင်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း သင့်စားပွဲပေါ်တွင်၊ သင်ရွေးချယ်သည့် ကုန်းပတ်နှင့်အတူ ပြင်သစ် သို့မဟုတ် စပိန်။ သင့်ကို အာရုံပြောင်းစေမယ့် ဂိမ်းတစ်ခုပါ။
သောကြာနေ့တွင် ကစားသမားတစ်ဦးသာ လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ကတ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သာလျှင်ဂိမ်းကိုအနိုင်ရနိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တော်စွန့်စားမှု။ ဤဂိမ်းသည် သင့်ကျွန်းပေါ်တွင် သင်္ဘောပျက်ပြီး အန္တရာယ်များစွာနှင့် ပင်လယ်ဓားပြများကို တိုက်ထုတ်ရာတွင် သင့်အား ကူညီပေးရမည့် Robinson အကြောင်း ဇာတ်လမ်းတွင် သင့်ကို နှစ်မြှုပ်ထားသည်။
ဤအခြားဂိမ်းသည် ကစားသမားတစ်ဦးတည်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး4ဦးအထိ ကစားနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းသည်၊ ၎င်းကို ကတ်များဖြင့် ကစားနိုင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကြောင်ကလေးကို လမ်းပေါ်ထွက်ရန် နွေးထွေးသောနေရာသို့ ရောက်အောင် လမ်းညွှန်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြို့ပြဝင်္ကပါကို ဖြတ်ကူးရန် လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပေ..။
Lúdilo- Bandit ဂိမ်း၏...
ကလေးများအတွက်ပင်၊ ၎င်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းသော ကတ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကစားသမား 1 ဦးမှ4ဦးအထိသာ ကစားနိုင်သည်။ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးစားနေသော ဓားပြသည် ၎င်းနှင့် မလွတ်ကြောင်း သေချာစေရမည်။ စာလုံးတွေက ဖမ်းဖို့လမ်းကို ပိတ်ဆို့နေလိမ့်မယ်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ ထွက်ပေါက်များအားလုံးကို ပိတ်လိုက်သောအခါ ဂိမ်းသည် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
Arkham Noir- Witch Cult Murders
Ludonova - Arkham Noir - ...
HP Lovecraft ၏ အံ့သြဖွယ်ထိတ်လန့်စရာဇာတ်လမ်းများဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသောဂိမ်း။ ၎င်းသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အထူးခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Miskatonic တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားအများအပြား သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဤကျောင်းသားများသည် ဂမ္ဘီရပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး ဤဖဲချပ်ဂိမ်းဖြင့် အဖြစ်မှန်၏ အမြစ်ကို သင်ရောက်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
Arkham Noir ကိုဝယ်ပါ။
သငျသညျဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေပါလျှင် အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ကို မွေးမြူ၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်များ မြှင့်တင်ခြင်းအပြင်၊ အဆိုပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ဘုတ်ဂိမ်းများထက် ပိုကောင်းသည်-
အသက် 8 နှစ်မှ အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် သင့်လျော်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဂိမ်း။ ၎င်းတွင် သင်သည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ကစားသမားများအားလုံး အတူတကွ အနိုင်ရမည် သို့မဟုတ် ရှုံးနိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သရဲခြောက်သောအိမ်ကြီးတွင် ကျင်လည်ကျက်စားနေသော ဝိညာဉ်တစ်ကောင်သေဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်တရားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ သင့်စိတ်ဝိညာဉ်သည် အေးချမ်းစွာ အနားယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Devir - တားမြစ်ကျွန်း...
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျွန်းမှ အဖိုးတန်အရာဝတ္ထုအချို့ကို ပြန်လည်ရယူရန် လူတိုင်း အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်းသည် တဖြည်းဖြည်းနစ်မြုပ်နေသောကြောင့် လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပေ။ ထက်မြက်သော စွန့်စားသူ4ဦး၏ ဖိနပ်ကိုစီး၍ ရေအောက်တွင် မြှုပ်နှံခြင်း မပြီးဆုံးမီ မြင့်မြတ်သော ရတနာများကို စုဆောင်းပါ။
Forbidden Island ကိုဝယ်ပါ။
အဖွဲ့များအတွက် စံပြပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သောဂိမ်းဖြစ်ပြီး မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကစားသမား ၂ ဦးမှ ၁၂ ဦးအထိ ကစားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် သင့်အား မိုင်းတွင်းရှိ ရွှေရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးရရှိရန် ကူညီပေးမည့် ကတ်2ကတ်ပါရှိသည်။ ကစားသမားများထဲမှ တစ်ဦးမှာ အဖျက်သမားဖြစ်သော်လည်း ကျန်သူများသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို မသိရပေ။ ပန်းတိုင်က သူ့ရှေ့မှာ ရွှေတံဆိပ်ရဖို့ပဲလေ။
စိတ်ကူးယဉ်လေယာဉ် - Arkham...
၎င်းသည် တူညီသော Arkham Noir ဇာတ်လမ်းနှင့် တူညီသော ဆက်တင်များကို အခြေခံထားသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် အကြောင်းအရာအသစ်၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများ၊ ပိုရူးသွပ်မှုနှင့် ပျက်စီးခြင်းနှင့် အိပ်ပျော်နေသော မကောင်းမှုများကို နှိုးဆွရန် ကြိုးစားမည့် နောက်ထပ် လူဆိုးများပါရှိသော 3rd Edition ဖြစ်သည်။ ကစားသမားသည် အခြားကစားသမားများနှင့် ပေးထားသည့် သဲလွန်စများအကူအညီဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဤဘေးအန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုးစားမည့် စုံစမ်းရေးမှူးတစ်ဦး ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
Arkham Horror ကိုဝယ်ပါ။
HABA 302387 ဂိမ်း...
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများလည်း ပါဝင်နိုင်သော်လည်း လေးနှစ်မှစပြီး ကလေးများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပူးပေါင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Haba Hamster ဂိုဏ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆောင်းရာသီအတွက် လိုအပ်သော အစားအစာများ အားလုံးကို စုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အထူးလက္ခဏာများ (ဘီး၊ လှည်း၊ မိုဘိုင်းဓာတ်လှေကား ...) စသည်တို့ပါရှိသော ဘုတ်တစ်ခုပေါ်ရှိ အရာအားလုံး။
သင့်အား Arkham ၏ ခပ်မိုက်မိုက် လမ်းသွယ်များနှင့် စံအိမ်များထဲသို့ ရောက်သွားစေမည့် နောက်ထပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခေါင်းစဉ်။ လျှို့ဝှက်ချက်များ နှင့် ကြောက်စရာကောင်းသော ဘီလူးများ သိုဝှက်ထားသည်။ အချို့သော အရူးအမူးသမားများနှင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများသည် ရှေးဟောင်းသူများကို ခေါ်ရန် ဤအဆောက်အဦအတွင်း၌ ကြံစည်နေကြသည်။ ကစားသမားများသည် အတားအဆီးအားလုံးကို ကျော်လွှားပြီး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ပါ့မလား?
The Mansion of Madness ကိုဝယ်ပါ။
Z-man အားကစားပြိုင်ပွဲ စပိန်...
ခေတ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါ။ အထူးပြုရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပျံ့နှံ့နေသောသေစေနိုင်သောဘေးဥပဒ်4ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့်ပျော်စရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုသခြင်းကို ပေါင်းစပ်ပြီး လူသားများကို ကယ်တင်ရန် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်အားလုံးကို ရယူရန် ကြိုးစားပါ။ အတူနေနိုင်မှ...
ဖုတ်ကောင်သတ်ခြင်းနှင့် Zombie Kidz Evolution
Scorpion Masqué- ဖုတ်ကောင်...
zombie apocalypse ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ကိုယ်တိုင် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ပြီး မသေသမျှကို ဖျက်ဆီးရန် အဖွဲ့တစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားတစ်ဦးစီတိုင်းသည် ထူးခြားသောစွမ်းရည်များပါ၀င်သော အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ၏အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သောကြောင့် တစ်ဦးစီတွင် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် ရောဂါပိုးရှိသော အစုအဝေးကို တိုက်ခိုက်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကလေးများအတွက် Kidz ဗားရှင်းပါရှိသည်။
Zombicide ဝယ်ပါ။ Kidz ဗားရှင်းကို ဝယ်ပါ။
Libellud Mysterium ပန်းခြံ...
Mysterium Park သည် သမရိုးကျ တရားပွဲတစ်ခုတွင် သင်ကိုယ်တိုင် နှစ်မြှုပ်ကာ မိုက်မဲသောလျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် အကောင်းဆုံး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုဂိမ်းများထဲမှ နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဒါရိုက်တာဟောင်း ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ အပြီးတိုင် မရရှိခဲ့ပေ။ အဲဒီနေ့ကစပြီး ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေ မရပ်မနား ဖြစ်ပျက်နေပြီး တချို့က သူတို့ရဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ်တွေ အဲဒီ့မှာ ပျံ့လွင့်နေတယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတယ်... မင်းရဲ့ပန်းတိုင်က အမှန်တရားကို စူးစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်ပြီး တရားမျှတတဲ့မြို့ကနေ မထွက်ခင်6ညသာ အချိန်ရလိုက်တာပါပဲ။
Mysterium Park ကိုဝယ်ပါ။
Devir - ဒဏ္ဍာရီများ ...
ဆုရရှိသူ၊ ၎င်းသည် သင်ဝယ်ယူနိုင်သည့် အကောင်းဆုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ခေါင်းစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် သရုပ်ဖော်ပညာရှင် Michael Menzel မှ ဖန်တီးထားသော ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အား Andor ၏နိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤနယ်မြေ၏ ရန်သူများသည် ဘုရင်ဘရန်ဒူး၏ ရဲတိုက်ဆီသို့ ဦးတည်နေကြသည်။ ကစားသူများသည် ရဲတိုက်ကို ကာကွယ်ရန် သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရမည့် သူရဲကောင်းများ၏ ဖိနပ်များထဲသို့ လျှောက်သွားကြသည်။ ပြီးတော့… နဂါးကို သတိထားပါ။
The Legends of Andor ကိုဝယ်ပါ။
ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်၊ သူငယ်ချင်းပါတီများအတွက်၊ သုံးစွဲရန် သင်ဂရုစိုက်သောသူများနှင့် အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်များ. ဤအရာသည် အကောင်းဆုံး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဂိမ်းခေါင်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် ဖြစ်သည်။
လူကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများကို ကြည့်ပါ။
လူနှစ်ယောက် သို့မဟုတ် စုံတွဲများအတွက်
ကစားသမားအရေအတွက်ကို နှစ်ယောက်သာ လျှော့ချလိုက်သောအခါ ဖြစ်နိုင်ချေများကို ကန့်သတ်မထားပေ။ ရှိတော့ ကစားသမားအတွဲများအတွက် ထူးခြားသောဂိမ်းများ. အကောင်းဆုံးအချို့မှာ-
Dual Tetris ဒီဇိုင်း
Diset - Tetris Dual၊...
မိတ်ဆက်အနည်းငယ်လိုအပ်သော ဘုတ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တွင် အပိုင်းများကို လွှင့်ပစ်ရန် အပေါ်ပိုင်းတွင် အပေါက်ပါသော ဒေါင်လိုက်ဘုတ်တစ်ခုရှိသည်။ အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် လူကြိုက်များသော retro ဗီဒီယိုဂိမ်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်များပါရှိပြီး အလှည့်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် အကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရောင်းရဆုံး abstract board ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ 1987 ခုနှစ်တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် လုံးဝပြန်လည်မွမ်းမံထားသည်။ သင့်တွင် ဆဋ္ဌဂံဘုတ်တစ်ခုနှင့် စကျင်ကျောက်အချို့ရှိသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြိုင်ဘက်၏ စကျင်ကျောက် (၆) လုံးကို ဘုတ်ပေါ်မှ ပစ်ချရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် အနောက်တိုင်းကို နှစ်သက်ပါက၊ သင်သည် သင်၏ပြိုင်ဘက်ကို ရန်ပွဲ၌ ရင်ဆိုင်ရမည့် ဝေးကွာပြီး တောရိုင်းအနောက်ဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည့် ဤကတ်ဂိမ်းကို သင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ ဆန့်ကျင်ရင် တစ်ဖက်က ညစ်ညမ်းသွားလိမ့်မယ်၊
၎င်းသည် မိသားစုတစ်စုလုံးအတွက် ဖန်တီးထားသည့် ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ဆန်းကြယ်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အတွဲလိုက်ကစားပါ။ သိမ်မွေ့သောသဲလွန်စများကို ပြန်ဆိုခြင်းဖြင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများကို ဖြေရှင်းရမည့် သူလျှိုတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် သင်သည် လျင်မြန်ပြီး ထက်မြက်သူဖြစ်ရမည်။ တစ်ချို့က အနီရောင်ငါးမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး သူတို့ကို ခွဲမပြနိုင်ရင် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေက ပိုဆိုးသွားမှာပါ...
Duo လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို ဝယ်ပါ။
SD ဂိမ်းများ- တောင်းဆိုမှု၊ အရောင်...
ဘုရင်ကြီးသေသွားပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။ ဝိုင်စည်အတွင်း ဇောက်ထိုးပေါ်လာသည်။ သူသည် အမည်မသိ အမွေဆက်ခံသူ တစ်ဦးမျှ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါ၀င်သည့် ဂိမ်းစတင်သည့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်- ပထမတစ်ခုက ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် ၎င်းတို့၏ကတ်များကို အသုံးပြု၍ နောက်လိုက်များကို စုဆောင်းမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတွင် နောက်လိုက်အများစုကို ရယူရန် တိုက်ပွဲဝင်မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ခွဲမှာ မဲအများဆုံးရသူက အနိုင်ရတယ်။
7 အံ့သြဖွယ် Duel
ဆုရ7Wonders နှင့် ပုံစံတူသော်လည်း ကစားသမား2ဦးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ မင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို တည်တံ့အောင်လုပ်ဖို့ မင်းရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါ။ ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဦးဆောင်ကာ အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခြင်း (ကတ်တစ်ခုစီသည် အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်) နှင့် စစ်တပ်ကို အားကောင်းစေခြင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ သင်၏ အင်ပါယာကို တိုးတက်ပြောင်းလဲစေခြင်း စသည်ဖြင့် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ရေး၊ သိပ္ပံပညာနဲ့ အရပ်ဘက် ရာထူးကနေ အနိုင်ယူနိုင်တယ်။
7 Wonders Duel ကိုဝယ်ပါ။
သငျသညျရှိပါက အိမ်မှာလေးတွေ၎င်းတို့ကို သင်ပေးနိုင်သော အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များထဲမှ တစ်ခုသည် ဤဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အတွက် ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်၊ သင်ယူရန်နှင့် ဖန်သားပြင်များနှင့် ခဏတာ ဝေးဝေးနေရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ...
ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများကို ကြည့်ပါ။
ဒါတွေက မင်းဝယ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးတွေထဲမှာ ဆိုတော့ လူတိုင်းပါဝင်နိုင်ပါသည်။သူငယ်ချင်းများ၊ သင့်သားသမီးများ၊ မြေးများ၊ အဘိုးအဘွားများ၊ မိဘများ ... ကြီးမားပြီး အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော အဖွဲ့များအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
အကောင်းဆုံး မိသားစုဂိမ်းများကို ကြည့်ပါ။
ပရိသတ်များအတွက် juegos က de cartasဤသည်မှာ ယခင်အပိုင်းများတွင် မပါဝင်ရသေးသော အချို့နှင့် decks များကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်-
၎င်းသည် ဂန္ထဝင်မိုနိုပိုလီဂိမ်းဖြစ်သော်လည်း ကတ်များဖြင့် ကစားသည်။ ငှားရမ်းမှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုရယူရန် စသည်ဖြင့် အက်ရှင်ကတ်များကို အသုံးပြုသည့် မြန်ဆန်ပြီး ပျော်စရာဂိမ်းများ
မိုနိုပိုလီ သဘောတူညီချက်ကို ဝယ်ပါ။
Tricky Moth ဂိမ်း
Devir - Moth Game...
ကစားသမားများထံ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အထဲမှ ပထမဆုံးထွက်သည့် ကတ်ဂိမ်းသည် အနိုင်ရသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ ၎င်းတို့သည် စားပွဲပေါ်ရှိ ကတ်တစ်ခုထက် ချက်ချင်းမြင့်မားသော သို့မဟုတ် နိမ့်သည့်နံပါတ်တစ်ခုဖြင့် အလှည့်တစ်ခုတွင် ကတ်တစ်ခုကို ချရမည်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ အနိုင်ရဖို့အတွက် လှည့်စားရမှာပါ...
Tricky Moth ဝယ်ပါ။
ရေစိုခံကတ်များစွာပါရှိသော မြန်နှုန်း၊ စူးစမ်းမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုများပါရှိသော ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် နွေရာသီတွင် ရေကူးကန်တွင် သင်ကစားနိုင်သည်။ ကတ်တစ်ခုစီသည် ထူးခြားပြီး အခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတူညီသော ပုံတစ်ပုံသာရှိသည်။ ထပ်တူကျသော သင်္ကေတများကို ရှာဖွေပါ၊ အသံထွက်ပြီး ကတ်ကို ကောက်ယူ သို့မဟုတ် ချလိုက်ပါ။ မတူညီသော minigames5ခုအထိ ကစားနိုင်သည်။
ဘုတ်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ကတ်ဂိမ်းများသည် ဂန္ထဝင်ဖြစ်ပါက အန်စာတုံးဂိမ်းများဖြစ်သည်။ ဤတွင်အချို့သော အန်စာတုံးဂိမ်းများ အထင်ရှားဆုံး-
Cayro - အန်စာတုံးများ -...
မင်းမှာ အန်စာတုံး ၁၄ လုံး၊ ရေခွက် ၁ ခွက်၊ နာရီမှန် ၁ လုံး၊ ဒါပဲ။ နားထောင်မှုနားလည်မှု၊ သည်းခံနိုင်မှု၊ သိမြင်မှုစွမ်းရည် တိုးတက်စေရန် အလှည့်ကျဂိမ်း။ သင်သည် အန်စာတုံးများကို လှိမ့်ပြီး သင့်အချိန်အတွင်း ချိတ်ဆက်ထားသော စကားလုံးများ၏ အများဆုံးအရေအတွက်ကို ပုံဖော်ရန်သာလိုသည်။ သင့်အချက်များကို ချရေးပြီး သင့်ပြိုင်ဘက်များကို အနိုင်ယူလိုက်ပါ။
Cross Dices ဝယ်ပါ။
ဖလားနှင့် အန်စာတုံးသည် သင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရန် လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသောဂိမ်းဖြစ်ပြီး သင်နှစ်သက်သည့်အတိုင်း ကစားနိုင်သော်လည်း အန်စာတုံးများကို လှိမ့်ကာ မည်သူက အကြီးဆုံးကိန်းဂဏန်းများကို လှိမ့်ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် ထွက်လာမည့် ပေါင်းစပ်မှုများကို လိုက်ဖက်ရန် ရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Asmodee- ပုံပြင် Cubes...
၎င်းသည် သမားရိုးကျ အန်စာတုံးဂိမ်းမဟုတ်သော်လည်း သင့်တွင် ဇာတ်ကောင်များ၊ နေရာများ၊ အရာဝတ္ထုများ၊ စိတ်ခံစားမှုများ စသည်တို့ဖြစ်နိုင်သော မျက်နှာများဖြင့် အန်စာတုံး ၉ ခုရှိသည်။ အကြံဉာဏ်သည် အန်စာတုံးများကို လှိမ့်ရန်ဖြစ်ပြီး သင်ရရှိလာသည့်အရာပေါ်မူတည်၍ အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြပါ။
Story Cubes ဝယ်ပါ။
Ravensburger - သပိတ်...
မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများအတွက် ဂိမ်းတစ်ခု။ စာလုံးပေါင်းများနှင့် စာလုံးပေါင်းများကို လောင်းရန်အတွက် လိုက်ဖက်သော သင်္ကေတပေါင်းစပ်မှုများကို ရှာဖွေရန် ကွင်းအတွင်း အန်စာတုံးများလှိမ့်ခြင်းဖြင့် မှော်ဆန်သောတိုက်ပွဲတစ်ခု။ ဂိမ်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကစားသမားသည် အန်စာတုံးများ ဆုံးရှုံးပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းအားများ လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ အန်စာတုံးကို အရင်ရှုံးတဲ့သူက အရှုံးသမားပဲ။
သင်ယူရန် လွယ်ကူသည်၊ သင်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဂိမ်းများသည် အလှည့်အပြောင်း ကိစ္စမဟုတ်သောကြောင့် လူတိုင်း ပါဝင်ကြသည်။ အမှတ်ပေးရန်အတွက် သင်သည် နံပါတ်များကို တတ်နိုင်သမျှ များများမှတ်သားထားရန် လိုအပ်သည်။
အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ ဘုတ်ဂိမ်းများ. ဘုတ်များသည် ဂိမ်း၏အခြေခံသာမက၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ပိုမိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဂိမ်းဇာတ်လမ်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ အချို့ဘုတ်များသည် ပြားသော်လည်း အချို့မှာ သုံးဖက်မြင်ဖြစ်ပြီး အတော်လေး ကောင်းမွန်ပါသည်။
Mattel Games ပြောပြမယ်..။
Scrabble သည် စကားလုံးများဖန်တီးရန် ဂန္ထဝင်နှင့် ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျပန်းပြုလုပ်ထားသော ကတ်7ခုဖြင့် စာလုံးပေါင်းဖော်ရန် စာလုံးပေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရပါမည်။ စာလုံးတစ်လုံးစီသည် တန်ဖိုးတစ်ခုရှိသောကြောင့် ရမှတ်များကို ယင်းတန်ဖိုးများအပေါ်အခြေခံ၍ တွက်ချက်သည်။
Plan B ဂိမ်းများ PBG40020...
ဤဘုတ်ဂိမ်းသည် သင့်အား သင်၏လက်သမားစိတ်ဝိညာဉ်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အုတ်ကြွပ်များဖြင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော mosaic အကွက်များကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ Evora နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံးအလှဆင်မှုများ ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကစားသမား2မှ4ဦးအထိကစားနိုင်ပြီး၎င်းသည်အသက် 8 နှင့်အထက်များအတွက်သင့်လျော်သည်။
Tactic Touché ကလေးများနှင့် ...
တစ်မိသားစုလုံးအတွက် နည်းဗျူဟာဘုတ်ဂိမ်း။ စပိန်ကုန်းပတ်ကတ်ဂိမ်းကို ဘုတ်ပြားဖြင့် ပြန်ဆိုချက်။ လှည့်စားဖို့ သတ္တိရှိလား။
Cefa Toys- Dracula ဂိမ်း...
တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်လာသော 80s မှဂန္ထဝင်။ Dracula ၏ရဲတိုက်၏ခရိုင်များရှိ Transylvania သစ်တောများမှမှုတ်သွင်းထားသောဂိမ်း။ ရဲတိုက်ထဲသို့ ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာသူဖြစ်သောကြောင့် မကောင်းမှု၏စွမ်းအားများနှင့် ကောင်းသောတိုက်ပွဲများ။ ဘယ်သူက ရမှာလဲ?
Cefa Toys- ဘုတ်ဂိမ်း၊...
လွမ်းဆွတ်စရာအကောင်းဆုံးက ရောင်းချနေဆဲ ဒီဂိမ်းကို မှတ်မိကြမှာပါ။ XNUMX နှင့် XNUMX ရာစုများအတွင်း မြေထဲပင်လယ်တစ်လျှောက် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူရောင်းချရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် မိသားစုတစ်စုလုံးအတွက် ပျော်စရာဂိမ်းတစ်ခု။ ဤပင်လယ်ဓားပြစွန့်စားခန်းတွင် သင်ပါဝင်နေချိန်တွင် သင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲပါ။
Cefa Toys- ဒစ္စနေးဂိမ်း...
စိတ်ကူးယဉ်နှင့် မှော်ဆန်သော မိသားစုတစ်စုလုံးအတွက် စွန့်စားခန်းဂိမ်း။ 80s များတွင် ကစားပြီးသော ခေါင်းစဉ်များအနက်မှ အခြားခေါင်းစဉ်များ နှင့် ထိုအချိန်က ကလေး အများအပြားသည် ယခုအခါ ၎င်းတို့၏ ကလေးများ ကို သင်ကြားပေးနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ချစ်ပ်ပြားများ၊ အန်စာတုံးများ၊ နာရီမှန်များ၊ ကတ်များ၊ ကတ်များ၊ ကစားတဲ့ဘီးနှင့် ဘုတ်ပြားများ... သို့သော် အားလုံး လွတ်နေပါသည်။ စိတ်ကူးကတော့ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘုတ်ဂိမ်းကို တီထွင်ဖို့ပါပဲ။ သင်လိုချင်သောစည်းမျဉ်းများ၊ သင်မည်ကဲ့သို့လိုချင်သည်၊ အဖြူရောင်ကင်းဗတ်ပေါ်တွင်ဆွဲရန်၊ ပုံနှိပ်စတစ်ကာများကိုအသုံးပြုခြင်းစသည်ဖြင့်။
သူတို့ကလွဲချော်နိုင်ဘူး ဂန္တဝင်ဘုတ်ဂိမ်းများငါတို့ကြားမှာ မျိုးဆက်တွေရှိခဲ့ပြီး ဘယ်တော့မှ ပုံစံမကျဘူး။ အကောင်းဆုံးများမှာ-
StonKraft Set ၏...
လက်ဖြင့်ထွင်းထားသော 31 × 31 စင်တီမီတာရှိသော သစ်သားဘုတ်တစ်ခု။ အလှဆင်ဒြပ်စင်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး သင်အလိုရှိသောသူတိုင်းနှင့် အကောင်းဆုံးဂိမ်းများကို ကစားနိုင်သည့် အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများသည် သံလိုက်အောက်ခြေပါရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဘုတ်ပြားပေါ်မှ အလွယ်တကူ ပြုတ်ကျခြင်းမရှိပါ။ ပြီးတော့ ဘုတ်ပြားကို ခေါက်ပြီး ကြွေပြားတွေအားလုံးကို ကိုင်ထားဖို့ သေတ္တာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Cordays - Case of...
Domino များသည် အနည်းငယ် မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။ ၎င်းသည် သမိုင်းတစ်လျှောက် ရှေးအကျဆုံးဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတွင် သင့်တွင် ပရီမီယံအိတ်နှင့် လက်လုပ်အပိုင်းများပါသည့် အကောင်းဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ကစားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းသာမဟုတ်၊ စတိုင်များစွာရှိသည်..။
30 × 30 စင်တီမီတာ အစိုင်အခဲဖြစ်သော သစ်သားသစ်သားဘုတ်နှင့် 40 မီလီမီတာ အချင်းရှိသော သစ်သား 30 အပိုင်းပိုင်း။ ဂန္ထဝင်ဂိမ်းကစားရန်လုံလောက်သည်။6နှစ်အထက်အတွက်သင့်လျော်သောရိုးရှင်းသောဂိမ်း။
Parcheesi နှင့် Goose ဂိမ်း
Cayro - Parchis နှင့် Oca...
ဘုတ်တစ်ခု၊ မျက်နှာနှစ်ခု၊ ဂိမ်းနှစ်ခု။ ဤဆောင်းပါးဖြင့် Parcheesi ၏ဂန္ထဝင်ဂိမ်းကိုကစားရန်သင်လိုအပ်သမျှနှင့်၎င်းကိုလှည့်ပါကငန်းဂိမ်းလည်းရှိသည်။ 26.8 × 26.8 စင်တီမီတာ သစ်သားဘုတ်၊ ခွက် ၄ လုံး၊ အန်စာတုံး ၄ လုံးနှင့် တိုကင် ၁၆ ခု ပါဝင်သည်။
Parcheesi / Goose ဝယ်ပါ။
Falomir- XXL ဘင်ဂိုဂိမ်း...
Bingo သည် တစ်မိသားစုလုံးအတွက်၊ အချိန်တိုင်း၏ဂန္တဝင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဘင်ဂိုတစ်ခုမစမချင်း ကတ်များပေါ်တွင်ဖြတ်ရန် ကျပန်းနံပါတ်များဖြင့် ဘောလုံးများကို လွှတ်တင်ရန် အလိုအလျောက်ဒရမ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါ။ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် တစ်ခုခုကို မဲနှိုက်နိုင်ပါတယ်...
ဂိမ်းများ - Jenga (Hasbro ...
Jenga သည် အာဖရိကတိုက်မှ လွန်ခဲ့သည့် ရာစုနှစ်များစွာက ထွက်ပေါ်လာသည့် ရှေးဦးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးလူတိုင်းကစားနိုင်သည်။ ပြိုကျခြင်းမရှိဘဲ မျှော်စင်မှ သစ်သားတုံးများကို ဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ကူးကတော့ မျှော်စင်ကို တတ်နိုင်သမျှ ဟန်ချက်မညီဘဲ ထားခဲ့ဖို့ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက်ရဲ့အလှည့်ရောက်ရင် ပြိုကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်းအစတွေကို ချလိုက်ရင် ဘယ်သူရှုံးမလဲ။
တစ်ပွဲတည်းနဲ့ ပျင်းနေပြီလား? သင် ခရီးတွေ အများကြီးထွက်ပြီး သင့်မှာရှိတဲ့ ဂိမ်းအားလုံးကို မယူနိုင်ဘူးလား။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ ဤ 400-piece စုပေါင်းဂိမ်းထုပ်ကိုဝယ်ရန်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအတွက် ညွှန်ကြားချက်များပါသည့် စာအုပ်တစ်အုပ် ပါဝင်သည်။ ထိုရာနှင့်ချီသောဂိမ်းများထဲတွင် စစ်တုရင်၊ ကတ်ဂိမ်းများ၊ အန်စာတုံးများ၊ ဒိုမီနိုများ၊ checkers၊ Parcheesi စသည်ဖြင့် အချို့သောဂိမ်းများရှိသည်။
သင်တစ် ဦး ပန်ကာဖြစ်လျှင် တီဗီစီးရီး၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်များ အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်များထဲမှ၊ သင်စိတ်ဝင်စားမည့် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာအလိုက် ဂိမ်းများရှိသည်။
Dragon Ball ကုန်းပတ်
Dragon Ball anime ပရိသတ်များသည် လူကြိုက်များသော DBZ စီးရီးမှ ဇာတ်ကောင်များပါသည့် ဤကတ်ဂိမ်းကို စွဲဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ကတ်ပြားကို မင်းအလှည့်မှာ ပစ်ချလိုက်ပြီး တစ်ခုချင်းစီရဲ့ စွမ်းအားတွေအရ ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူဖို့ ကြိုးစားပါ။
DBZ Deck ကိုဝယ်ပါ။
Doom သည် သမိုင်းတစ်လျှောက် ဂန္တဝင် ဗီဒီယိုဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုတွင် ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် သင်စိတ်ကူးနိုင်သော အကောင်ပေါက်ဘီလူးများကို တိုက်ထုတ်ရန် ကြိုးစားရန် ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် လက်နက်ကိုင်မရိန်းတပ်သားဖြစ်လာမည့် ဤဘုတ်ဂိမ်းနှင့်အတူ ဘုတ်အဖွဲ့သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။
Game of thrones ဘုတ်ဂိမ်း
Game of Thrones - အဆိုပါ ...
သင်ဟာ နာမည်ကြီး HBO စီးရီးတွေကို စွဲလန်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Game of Thrones-themed board game ကိုလည်း သင်နှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်။ ကစားသမားတိုင်းသည် ကြီးမြတ်သောအိမ်များထဲမှ တစ်ခုကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး အခြားအိမ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် ၎င်းတို့၏ လိမ္မာပါးနပ်မှုနှင့် အလားအလာကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အားလုံးက စီးရီးရဲ့ အထင်ရှားဆုံး ဇာတ်ကောင်တွေပါ။
Game of Thrones ကိုဝယ်ပါ။
မြို့တော်နှင့် လူကြိုက်များသော ကာတွန်းစီးရီးများမှ ဇာတ်ကောင်များသည် ဤချစ်စရာကောင်းသော အဝါရောင်များ၏ဘဝတွင် သင်နှစ်မြှုပ်မည့် ပျော်ရွှင်စရာဘုတ်အဖွဲ့တွင် ဤနေရာတွင် အသက်ဝင်လာပါသည်။
Walking Dead ဉာဏ်စမ်း
၎င်း၏ဒိန်ခဲများ၊ ကြွေပြားများ၊ ဘုတ်များ၊ ကတ်များဖြင့် မေးခွန်းများပါသည့် သာမန်နှင့်သာမန် အသေးအဖွဲ လိုက်ရှာမှု ... သို့သော် ကွာခြားချက်မှာ ၎င်းသည် ကျော်ကြားသော ဖုတ်ကောင်များ၏ စီးရီးမှ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။
Trivial TWD ကိုဝယ်ပါ။
Indiana Jones ရုပ်ရှင်များတွင် Temple of Akator အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် စွန့်စားမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုခေါင်းစဉ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ သူ့ရဲ့ခေတ်က ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို အမှတ်ရစေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
La Torre ကိုဝယ်ပါ။
Noris - ဂိမ်းသည် ဂျာမန်...
ဂိမ်းတစ်ခုလိုပါပဲ၊ Jumanji လည်း အလားတူပါပဲ။ ဘုတ်ဂိမ်းအကြောင်း နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်သည် မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် Escape Room ပုံစံဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေကို ရှာဖွေပြီး ဒီတောထဲမှာ အသက်ရှင်လျက် လွတ်မြောက်နိုင်ရင် ...
အလားတူ၊ အတုခိုးစမ်းသပ်မှုများ၊ အမေးအဖြေများ၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ ပဟေဠိများ အစရှိသည်တို့ များစွာရှိသော ပုံမှန် Party & Co. ဒါပေမယ့် အားလုံးက လူကြိုက်အများဆုံး Disney စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါ။
Party Disney ကိုဝယ်ပါ။
Diset - မာစတာစားဖိုမှူး၊ ဂိမ်း ...
TVE ချက်ပြုတ်ခြင်းအစီအစဉ်တွင်လည်း ဂိမ်းတစ်ခုရှိသည်။ Masterchef တွင် သတ်မှတ်ထားသော ဤဘုတ်အဖွဲ့ကို မိသားစုတစ်စုလုံးနှင့် ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန် ပရိုဂရမ်အပေါ်အခြေခံ၍ ပဟေဋ္ဌိများဖြင့် ကစားပါ။
Jurassic Park ဇာတ်လမ်းကို သင်နှစ်သက်ပြီး ဒိုင်နိုဆောများကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက Jurassic World ရုပ်ရှင်မှ ဤတရားဝင်ဘုတ်ဂိမ်းကို သင်နှစ်သက်မည်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကို တူးဖော်ဖော်ထုတ်ရန်၊ ဒိုင်နိုဆော DNA ဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အလုပ်လုပ်ရန်၊ ဒိုင်နိုဆောများအတွက် လှောင်အိမ်များတည်ဆောက်ကာ ပန်းခြံကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကစားသမားတစ်ဦးစီက အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Jurassic World ကိုဝယ်ပါ။
စပိန်စီးရီး La casa de papel သည် Netflix ကို အနိုင်ယူခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံအများအပြားတွင် ကြည့်ရှုမှုအများဆုံးများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သူ၏နောက်လိုက်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ ဤဘုတ်ဂိမ်းသည် သင့်အခွေမှ လွတ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သူခိုးဓားစာခံတွေနဲ့ မိသားစုလိုက် ကစားနိုင်တဲ့ ကြွေပြားတွေပါတဲ့ ဘုတ်ပါ။
အံ့ spl ဘွယ်
Space Cowboys အခြား...
Marvel universe နှင့် Avengers တို့သည် board games တွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဤဂိမ်းတွင် သင်သည် စူပါဟီးရိုးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို စုစည်းပြီး Thanos ဂြိုဟ်ကို မဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ စကြဝဠာပေါင်းစုံမှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ Infinity Gems ကို ရှာတွေ့ရပါမယ်။
Cluedo The Big Bang သီအိုရီ
၎င်းသည် တူညီသော ဒိုင်းနမစ်များနှင့် ကစားနည်းများဖြင့် ဂန္တဝင် Cluedo ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် နာမည်ကြီး စီးရီး The Big Bang Theory ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါ။
Big Bang Theory ကိုဝယ်ပါ။
စပိန်ရုပ်သံစီးရီး La que se avecina သည် ယခုအခါ တရားဝင်ဂိမ်းတစ်ခုလည်း ရှိသည်။ နာမည်ကျော် Montepinar အဆောက်အအုံနှင့် ၎င်း၏ဇာတ်ကောင်များဖြင့် ကစားပါ။ ၎င်းသည် 8 နှစ်မှသင့်လျော်ပြီး 12 ယောက်အထိကစားနိုင်သည်။ ဂိမ်းတွင် အရာများကို ရပ်ရွာအတွက် အဆိုပြုထားပြီး ကစားသမားတစ်ဦးစီက မဲပေးရန် သို့မဟုတ် မဆုံးဖြတ်ပါ။
အသေးအဖွဲလိုက်စားမှု - Harry ...
Harry Potter ဇာတ်လမ်းတွင် ရုပ်ရှင်များ၊ စီးရီးများ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့် ဘုတ်ဂိမ်းများကိုလည်း လှုံ့ဆော်ပေးထားသည်။ သူ့စာအုပ်တွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီ Trivia မှာ သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ၂၁ ရာစုရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး မှော်ဆရာ ဇာတ်လမ်းအကြောင်း မေးခွန်းပေါင်း ထောင်နဲ့ချီ ရှိလာပါပြီ။
Trivial HP ကိုဝယ်ပါ။
အသေးအဖွဲ Lord of the Rings
ELEVEN FORCE အသေးအဖွဲ အပြည့်အစုံ...
The Hobbit နှင့် The Lord of the Rings တို့သည် ရုပ်ရှင်ရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့် အအောင်မြင်ဆုံး စာအုပ်များထဲမှ ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် ၎င်းတို့သည် vieogames များကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပြီး၊ ဤအသေးအဖွဲကဲ့သို့သော ဘုတ်ဂိမ်းများဖြစ်သည်။ ဂန္ထဝင်အသေးအဖွဲဂိမ်းကို ယခုအလယ်ခေတ်တွင် အရူးအမူးပုံစံဖြင့် ဝတ်ဆင်ထားသည်။
Trivia Lord of the Rings ကိုဝယ်ပါ။
စွမ်းအားနှင့် အမှောင်ဘက်ခြမ်းသည် ရေပန်းစားသော သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံထားသည့် ဤဂိမ်းဖြင့် သင့်စားပွဲသို့ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ အသက်2နှစ်မှ ကစားသမား 14 ဦးအတွက် ဂိမ်းဖြစ်ပြီး Jedi နှင့် Sith အကြား ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် တိုက်ပွဲများကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သည့်ဤအနုစိတ်ဖြင့်ထုလုပ်ထားသောအသေးစားရုပ်တုများဖြင့်သင်၏တပ်ဖွဲ့များကို ဦး ဆောင်ပါ။
Star Wars Legion ကိုဝယ်ပါ။
စာအုပ်တွေကနေ ဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ ရုပ်ရှင်ကို သွားကြတယ်။ Dune သည် ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့် ရုပ်ရှင်ရုံများသို့ မကြာသေးမီက ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ၊ သင်သည် ဤကောင်းမွန်သော ဗျူဟာဘုတ်ဂိမ်းကိုလည်း ကစားနိုင်သည်။ နာမည်ကြီး သဲကန္တာရနှင့် မြုံသော ဂြိုဟ်ကြီး နှင့် Dune မှ သင်မျှော်လင့်ထားသမျှ အရာအားလုံးကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လျက်၊
အားလုံး ဗျူဟာမြောက် ဝိညာဉ်ရှိပြီး စစ်ပွဲဂိမ်းများကို နှစ်သက်သူများCapture the Flag (CTF) နှင့် ၎င်းတို့သည် အောက်ပါ နည်းဗျူဟာဂိမ်းများကို ကလေးများအဖြစ် နှစ်သက်ကြလိမ့်မည်-
ERA သည် သင့်အား အလယ်ခေတ် စပိန်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်၊ အသေးစား ၁၃၀၊ အန်စာတုံး ၃၆ ခု၊ ဂိမ်းဘုတ် ၄ ခု၊ တံစို့ ၂၅ ခု၊ အမှတ်အသား ၅ ခုနှင့် ရမှတ်များအတွက် ဘလော့ဂ် ၁ ခုပါသည့် ဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်သည်။ စပိန်သမိုင်းကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ဤကောင်းမွန်သောခေါင်းစဉ်ဖြင့် နည်းလမ်းတစ်ခု။
၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကစားသူ2သန်းဖြင့် ရောင်းအကောင်းဆုံးနှင့် ဆုချီးမြှင့်မှုအများဆုံး ဗျူဟာဂိမ်းပါ Catan ကျွန်းကို အခြေခံပြီး ပထမဆုံး ရွာတွေကို ဖန်တီးဖို့ အခြေချနေထိုင်သူတွေ ရောက်လာကြတယ်။ ကစားသမားတိုင်းတွင် သူ့ကိုယ်ပိုင်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို မြို့များအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ဤမြို့များကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက် သင်သည် အရင်းအမြစ်များ လိုအပ်သည်၊ စီးပွားရေးမဟာမိတ်များ ထူထောင်ကာ သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ပါ။
၎င်းသည် အကောင်းဆုံး ဗျူဟာမြောက် ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Twilight Wars လွန်ခေတ်ကို အခြေခံ၍ ရှေးခေတ် Lazax အင်ပါယာ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော မျိုးနွယ်စုများသည် ၎င်းတို့၏ ဇာတိကမ္ဘာများဆီသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့် ကာလတစ်ခု ရှိနေပါသည်။ နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုလုံးသည် ရာဇပလ္လင်ကို ပြန်လည်ရယူရန် တိုက်ပွဲတွင် တစ်ဖန် လှုပ်ခတ်သွားလိမ့်မည်။ ပိုမိုထက်မြက်သော စစ်အင်အားနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကို အောင်မြင်သူသည် ကံကောင်းသူဖြစ်လိမ့်မည်။
Twilight Imperium ကိုဝယ်ပါ။
Diset- Stratego မူရင်း...
စစ်ပွဲနှင့်ဗျူဟာဂိမ်းများ၏ဂန္ထဝင်။ လိမ္မာပါးနပ်စွာဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် တိုက်ခိုက်ကာကွယ်ရန်၊ ရန်သူ့အလံကို အမျိုးအစား ၄၀ ရှိသော သင်၏စစ်တပ်နှင့်အတူ သိမ်းပိုက်ရန် ဘုတ်အဖွဲ့။
Hasbro Gaming- အန္တရာယ်...
ဤဂိမ်းသည် ဤအမျိုးအစား၏ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ သင်သည် ကမ္ဘာကြီးကို စိုးမိုးရန် ဗျူဟာတစ်ခုကို ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ 300 မွမ်းမံထားသောကိန်းဂဏန်းများ၊ ကတ်များပါသောမစ်ရှင်များနှင့်အလွန်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းဖြင့်။ ကစားသမားများသည် မြေပုံကိုဖြတ်၍ တပ်များဖန်တီးကာ တပ်ဖွဲ့များကို ရွှေ့ကာ တိုက်ခိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အန်စာတုံးများ၏ ရလဒ်ပေါ်မူတည်၍ ကစားသမားသည် အနိုင်ရသည် သို့မဟုတ် ရှုံးမည်ဖြစ်သည်။
ဒစ္စနေးဗီလိန်များအားလုံး Machiavellian အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲရန်အတွက် ဂိမ်းတစ်ခုတွင် အတူတကွ ရောက်ရှိလာပါက၊ သင့်စိတ်ကြိုက်ဇာတ်ကောင်ကို ရွေးချယ်ပြီး သူပိုင်ဆိုင်သည့် ထူးခြားသောစွမ်းရည်များကို ရှာဖွေပါ။ အလှည့်တစ်ခုစီတွင် အကောင်းဆုံးဗျူဟာကိုဖန်တီးပြီး အနိုင်ရရန်ကြိုးစားပါ။
Uwe Rosenberg မှ၊ ဤအထုပ်တွင် နှစ်ထပ်ဂိမ်းဘုတ် ၉ ခု၊ ကျောက်တုံး ၁၃၈ ခု၊ အာဟာရတံဆိပ်ခေါင်း ၃၆ ခု၊ တိရစ္ဆာန်ကျောက်တုံး ၅၄ ခု၊ လူ ၂၅ ဦး၏ ကျောက်တုံးများ၊ ခြံစည်းရိုး ၇၅ ခု၊ နွားတင်းကုပ် ၂၀၊ အိမ်ခန်းတိုကင် ၂၄ ခု၊ နိုင်ငံ့အိမ် ၃၃ လုံး၊ ဧည့်သည်ကြွေပြား ၃ ချပ်၊ အကွက်များ၊ အမှတ်ပေးတုံး9ခု၊ ကစားသမား 138 ဦး၏ စတင်သောကျောက်၊ ကတ် 36 နှင့် လက်စွဲစာအုပ်။ ငတ်မွတ်မှုကို တိုက်ဖျက်ရန် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် သင်၏ အလယ်ခေတ် လယ်ယာကို တည်ဆောက်စီမံနိုင်စေရန် အသေးစိတ်အချက်များ ချို့တဲ့နေမည်မဟုတ်ပေ။
Great War Centennial Edition
Richar Borg ၏ The Great War သို့မဟုတ် The Great War ဟူသော ခေါင်းစဉ်သည် သင့်အတွက် ရင်းနှီးနေမည်မှာ သေချာပါသည်။ ၎င်းသည် Memoir 44 နှင့် Battlelore ကဲ့သို့သော ဒီဇိုင်နာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပထမကမ္ဘာစစ်၏ စစ်ပွဲများကို အခြေခံထားပြီး ကစားသမားများအား နှစ်ဖက်ပူးပေါင်း၍ ကတုတ်ကျင်းများနှင့် စစ်မြေပြင်များတွင် ပေါက်ခဲ့သော သမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲများကို ပြန်လည်ကစားခွင့်ပေးသည်။ တိုက်ပွဲများကိုဖြေရှင်းပေးသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အန်စာတုံးများအတွက်ကတ်များပါရှိသောအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဂိမ်း။
တူညီသောစာရေးဆရာအားဖြင့်၊ ဤအခြားသည် သင်ဝယ်နိုင်သော အကောင်းဆုံးစစ်ပွဲဗျူဟာဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာကို ချဲ့ထွင်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချဲ့ထွင်မှုများနှင့် မတူညီသော အခြေအနေများနှင့်အတူ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် ဤအချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။ စစ်ရေးဗျူဟာနဲ့ သမိုင်းကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ လက်အိတ်လိုပါပဲ။ အတန်ငယ်ရှုပ်ထွေးပေမယ့်...
Imhotep - အီဂျစ်ပြည်ကို တည်ဆောက်သူ
Devir - Imhotep၊...
ရှေးခေတ်အီဂျစ်သို့ပြန်သွားပါ။ Imhotep သည် ထိုအချိန်က ပထမဆုံးနှင့် အကျော်ကြားဆုံး တည်ဆောက်သူဖြစ်သည်။ ယခု ဤဘုတ်ဂိမ်းဖြင့် သင်သည် ပြိုင်ဘက်များကို အောင်မြင်မှုမရအောင် တားဆီးရန်အတွက် အထိမ်းအမှတ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏အောင်မြင်မှုများကို ကိုက်ညီအောင်ကြိုးစားနိုင်သည်။
နိုင်ငံတော်၏နောက်ထပ် Master Builder ဖြစ်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ပါ။ သင်၏မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်ဖြင့် မြင့်မြတ်သူကို အထင်ကြီးစေပြီး ဤဗျူဟာဂိမ်းဖြင့် ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးကို ကူညီပေးပါ။ သင့်တွင် ရွေးချယ်ရန် အထုပ်ထဲတွင် ဇာတ်ကောင် 8 ကတ်၊ ခရိုင်ကတ် 68 ခု၊ အကူအညီကတ်7ခု၊ သရဖူ တိုကင် 1 နှင့် ရွှေဒင်္ဂါး တိုကင် 30 ရှိသည်။
သင့်တွင်အွန်လိုင်းဘုတ်ဂိမ်းများစွာရှိသည်။ အခမဲ့ကစားပါ တစ်ယောက်တည်း သို့မဟုတ် ဝေးကွာနေသော အခြားသူများနှင့် လူကိုယ်တိုင်သွားစရာမလိုဘဲ ပျော်စရာကောင်းသော မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများအတွက် အက်ပ်များ (၎င်းသည် ၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုအချို့ကို သေချာပေါက်ယူဆောင်သွားသော်လည်း ပေါ့ပါးသောစျေးနှုန်းဖြင့် ... ပိုကောင်းလုနီးပါး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းရှိသည်))
စတိုးဆိုင်တွင်သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ Google Play စ သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင် သို့မဟုတ် ပေါ်တွင် Apple က App Store ကိုသင့်တွင်ရှိသော operating system ပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါခေါင်းစဉ်များ-
iOS နှင့် Android အတွက် Catan Classic
Android အတွက် Carcassone
iOS နှင့် Android အတွက် မိုနိုပိုလီ
iOS နှင့် Android အတွက် ပြောပြမယ်။
iOS နှင့် Android အတွက် ရုပ်ပုံကားချပ်
iOS နှင့် Android အတွက် စစ်တုရင်ကစားနည်း
iOS နှင့် Android အတွက် Goose ဂိမ်း
၎င်းတို့ကို ယခင်အမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သီးခြားလွတ်လပ်သော အမျိုးအစားအဖြစ် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့် ဘုတ်ဂိမ်းအမျိုးအစား နှစ်ခုလည်း ရှိပါသည်။ နောက်ပြီး ဒါတွေက အောင်မြင်တယ်။ ရက်စက်သောအောင်မြင်မှုပြီးတော့ သူတို့မှာ ဒီစတိုင်တွေရဲ့ ပရိသတ် ပိုများလာပါတယ်-
ဘုတ်ဂိမ်း Escape Room
Escape Rooms များသည် ခေတ်ဆန်လာခဲ့ပြီး စပိန်ပိုင်နက်အားလုံးကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် မိသားစုများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ပဟေဠိများကို ဖြေရှင်းနိုင်စေသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံများစွာရှိ အနှစ်သက်ဆုံးဝါသနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့တွင် အရသာအားလုံး ကျေနပ်စေရန် (သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်၊ ထိတ်လန့်စရာ၊ သမိုင်း၊ ...)။ Covid-19 ကြောင့် ပြင်းထန်သော ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေသည်မှာ မယုံနိုင်စရာ အစုံပင်ဖြစ်သည်။ အဲဒီကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့၊ လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး Escape Room ခေါင်းစဉ်များ အိမ်မှာကစားဖို့။
အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများကို Escape Room ကိုကြည့်ပါ။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၏ နောက်တစ်မျိုးမှာ၊ အခန်းကဏ္playingကစား. ၎င်းတို့သည် အလွန်စွဲလမ်းကြပြီး အပြင်အဆင်များစွာဖြင့် ၎င်းတို့တွင် ကြီးမားသော အမျိုးမျိုးလည်းရှိသည်။ ဤဂိမ်းများသည် ရည်မှန်းချက်များပြည့်မြောက်ရန် ဂိမ်းအတွင်းတွင် သင်ကစားရမည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုတွင် သင့်အား နှစ်မြှုပ်စေပါသည်။
ဘယ်အချိန်မှာ သင့်လျော်သောဘုတ်ဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ အချို့သော့များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ဤထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များသည် သင့်အား အမြဲတမ်းမှန်ကန်သောဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ရန် ကူညီပေးပါမည်-
ကစားသမားအရေအတွက်: ပါဝင်မည့် ကစားသမားအရေအတွက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးပါသည်။ လူ ၂ ယောက်အတွက်သာ၊ အခြားလူများစွာအတွက်၊ အုပ်စုများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့များနှင့်ပင် ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် စုံတွဲများအတွက် သို့မဟုတ် နှစ်ဦးအတွက်ဖြစ်ပါက ၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးသည် လူနှစ်ဦးသာ ကစားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့သည် သူငယ်ချင်းများစုရုံးခြင်း သို့မဟုတ် မိသားစုဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများအတွက်ဖြစ်လျှင် ယင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
အသက်အရွယ်: ဂိမ်းကို အကြံပြုထားသည့် အသက်အရွယ်ကို အတည်ပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ကလေးမှ သက်ကြီးရွယ်အိုအထိ လူတိုင်းအတွက် ကစားနိုင်သော ဂိမ်းများစွာရှိသောကြောင့် မိသားစုလိုက်ကစားရန် သင့်တော်ပါသည်။ ယင်းအစား၊ အချို့အကြောင်းအရာများသည် အရွယ်မရောက်သေးသူများ သို့မဟုတ် လူကြီးများအတွက် သီးခြားဖြစ်သည်။
ချဉ်းကပ်နည်း: အချို့ဂိမ်းများသည် မှတ်ဉာဏ်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ အခြားဂိမ်းများသည် ယုတ္တိဗေဒကို မြှင့်တင်ရန်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်အတွက်၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအား မြှင့်တင်ရန်၊ သို့မဟုတ် မော်တာကျွမ်းကျင်မှုအတွက်နှင့် ပညာရေးတို့ကိုပင် မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အရွယ်မရောက်သေးသူများ အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ၊ ကလေး၏ လိုအပ်ချက်အရ အသင့်လျော်ဆုံးကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားသင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ဘုတ်ဂိမ်းအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းကို နှစ်သက်ကြသည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူမှုဖြင့် အောင်မြင်စေရန် အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ ကစားဟန်ကို ခွဲခြားသိရန် အရေးကြီးပါသည်။
ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် သင်ယူမှုမျဉ်းကွေး: လူငယ် သို့မဟုတ် လူကြီး ကစားမည်ဆိုပါက ဂိမ်း၏ ရှုပ်ထွေးမှု မမြင့်မားဘဲ ၎င်းတွင် လွယ်ကူသော သင်ယူမှုမျဉ်းရှိကြောင်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် ဂိမ်း၏ ဒိုင်းနမစ်များကို လျင်မြန်စွာ နားလည်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကစားနည်းကို မသိခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပျက်ခြင်းတို့ကို ခံရမည်မဟုတ်ပေ။
ကစားရန်နေရာ- ဘုတ်ဂိမ်းအများအပြားသည် သင့်အား သမားရိုးကျစားပွဲ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကစားနိုင်စေပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အခြားသူများသည် ဧည့်ခန်း သို့မဟုတ် ဂိမ်းအခန်းတွင် နေရာအနည်းငယ်ပိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အိမ်၏ကန့်သတ်ချက်များကိုကောင်းစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်ရွေးချယ်ထားသောဂိမ်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကောင်းစွာလိုက်လျောညီထွေရှိမရှိကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အားလပ်ခွင့်ပေးပါ » ယေဘုယျ » အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများ